Vaovao - COVID 19 FITEHIRIZAM-BOKIN'NY MARKET HOT MELT ADHESIVE (HMA) 2020 TEKNOLOGIANA FAMPANDROSOANA, FAMPANDROSOANA, MPILALAO MAFY ARY HETSAKA HETRA 2025
Tatitry ny fikarohana momba ny tsena Global Hot Melt Adhesive (HMA) 2020: Famakafakana ny fiatraikany COVID-19
Ilay 'Tsenan'ny Adhesive mafana (HMA)'tatitra fikarohana navoakan'ny Brand Essence Market Research dia mamaritra ny tsena mifandraika amin'izany sy ny fahitana mifaninana ary koa ny mombamomba ny faritra sy ny mpanjifa. Raha fintinina, ny fanadihadiana dia manarona ny lafiny lehibe rehetra amin'ity sehatry ny asa ity izay misy fiatraikany amin'ny fironana efa misy, ny tombom-barotra, ny fizarana tsena, ny haben'ny tsena, ny fanombatombanana isam-paritra ary ny drafitry ny fanitarana an'ireo mpilalao fototra ao amin'ny tsenan'ny Hot Melt Adhesive (HMA).
Ny tatitra iray momba ny tsena momba ny Hot Melt Adhesive Market dia misy famakafakana fohy momba ny fironana farany eo amin'ny tsena. Ny tatitra dia misy koa ny sombiny feno momba ny statistika, ny vinavinan'ny fidiram-bola ary ny fanombanana ny tsena, izay manasongadina ihany koa ny toerana misy azy eo amin'ny sehatry ny fifaninanana sy ny firoboroboan'ny ekipa eken'ireo mpilalao indostrialy lehibe.
Adhesive melt mafana (HMA), fantatra koa amin'ny lakaoly mafana, dia endrika adhesive thermoplastic izay amidy matetika ho toy ny kiborin'ny varingarina matevina misy savaivony maro karazana natao hampiasaina amin'ny basy lakaoly mafana. Ny basy dia mampiasa singa manaparitaka adidy mitohy hamelomana ny lakaoly plastika, izay atosiky ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny basy na amin'ny alàlan'ny mekanika miteraka mekanika amin'ilay basy, na amin'ny faneren'ny rantsantanana mivantana. Ilay lakaoly nopotsehina avy tamin'ilay nozafafa nafana dia mafana tokoa aloha mba handoroana ary na dia hoditra mivonto aza. Marefo ny lakaoly rehefa mafana, ary mihamafy ao anatin'ny segondra vitsy ka hatramin'ny iray minitra. Ny paty mafana miempo mafana dia azo ampiharina amin'ny fanobohana na famafazana.
Amin'ny fampiasana indostrialy, ny adhesives miempo mafana dia manome tombony maro noho ny adhesives miorina amin'ny solvent. Mihena na esorina ireo fitambarana organika miovaova, ary esorina ny dingana fanamainana na fanasitranana. Adhesives miempo mafana manana fiainana talantalana lava ary matetika dia azo esorina tsy misy fitandremana manokana. Ny sasany amin'ireo fatiantoka dia misy ny enta-mavesatra entin'ny substrate, mametra ny fampiasa amin'ny substrates tsy mora tohina amin'ny mari-pana avo kokoa, ary ny fahaverezan'ny tanjaka mifamatotra amin'ny mari-pana avo kokoa, hatramin'ny famoahana ny adhesive. Azo ahena izany amin'ny alàlan'ny fampiasana adhesive reactive izay aorian'ny fanamafisana dia mila fanasitranana bebe kokoa, ohatra, amin'ny hamandoana (oh: urethanes reaction sy silicones), na sitrana amin'ny taratra ultraviolet. Ny HMA sasany dia mety tsy mahatohitra ny fanafihana simika sy ny toetrandro. Ny HMA dia tsy mamoy ny hateviny mandritra ny fanamafisana; Ny adhesives miorina amin'ny solvent dia mety hahavery hatramin'ny 50-70% ny hatevin'ny sosona mandritra ny fanamainana.
Amin'ny taona 2019, ny haben'ny tsena Hot Melt Adhesive (HMA) dia 7500 tapitrisa US $ ary hahatratra 11700 tapitrisa US $ izany amin'ny 2025, mitombo amin'ny CAGR 6,6% manomboka amin'ny 2019;
Voalohany indrindra, ny fitomboan'ny fangatahana fametahana hafanana mafana no mitarika ny haben'ny tsena. Faharoa, ny tsena dia atosiky ny fitomboan'ny fepetra takiana amin'ireo orinasa mpampiasa farany toa ny fanamarihana marika, fonosana, fananganana sy fanamboarana, fanamboaran-kazo, famandrihana boky, fiara, tsy misy tenona, fitaterana sy kiraro kiraro. Ho fanampin'izany, ny fironana ankapobeny amin'ny fiovana lavitra amin'ireo glues miorina amin'ny solvent vokatry ny vokatra manimba ateraky ny fitambarana organika tsy miovaova omena avy amin'ireto adhesives na glues ireto dia andrasana hampiroborobo ny tsena mandritra ny vanim-potoana mialoha. Ny tsindry maharitra ataon'ny manampahefana miasa mifehy toy ny EPA (Environment Protection Agency) & REACH dia antenaina hampihena ny fampiasana ny adhesives miorina amin'ny solvent ho ezaka hampihena ny vokatra tsy manimba eo amin'ny tontolo iainana, ka hisy fiatraikany amin'ny tsenan'ny adhesives mafana. Ankoatr'izay, ny fatorana mafy tsy misy fangatahana fanasitranana ny lakaoly aorian'ny fampiasana azy dia tombony fanampiny ho an'ny famolavolana sy ny fomba fampiasa farany ambany. Fahatelo, i Amerika Avaratra no manana ny tsena mibahan-toerana be indrindra amin'ny dity mafana nafana ary andrasana hanana ny iray ampahatelon'ny fitakiana manerantany amin'ireo faritra ireo. Eoropa koa dia antenaina hanana fitomboana lehibe eo amin'ny tsenan'ny fametahana hafanana mafana mandritra ny vanim-potoana mialoha. Amerika afovoany sy atsimo koa dia andrasana hanana fitomboana haingana.
Amin'ity tatitra ity, ny taona 2018 dia noheverina ho taona fototra ary ny taona 2019 hatramin'ny taona 2025 dia ny vanim-potoana mialoha hanombanana ny haben'ny tsena ho an'ny Hot Melt Adhesive (HMA).
Ity tatitra ity dia mandalina ny haben'ny tsenan'ny Hot Melt Adhesive (HMA), izay mifantoka indrindra amin'ireo faritra manan-danja toa an'i Etazonia, Vondron Eropeana, Sina ary faritra hafa (Japon, Korea, India ary Azia atsimo atsinanana).
Ity fandalinana ity dia manolotra ny famokarana, fidiram-bola, fizarana tsena ary taham-pisondrotana ho an'ny orinasa lehibe tsirairay, ary koa mandrakotra ny angon-drakitra (famokarana, fanjifana, fidiram-bola ary fizarana tsena) isaky ny faritra, karazana ary fampiharana. ny angon-drakitra fanaparitahana tantara hatramin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019, ary vinavina hatramin'ny 2025.
Ho an'ireo orinasa ambony any Etazonia, Vondrona Eropeana ary Sina, ity tatitra ity dia manadihady sy mamakafaka ny famokarana, ny sandany, ny vidiny, ny fizarana tsena ary ny taham-pisondrotana ho an'ireo mpamokatra ambony, angona lehibe hatramin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019.